နေ့: စက်တင်ဘာလ 16 2019
တရုတ်, ယခုနှစ်ပထမရှစ်လအတွင်းနှင့်အတူဥရောပကုန်တင်ရထားများအကြားလေကြောင်းခရီးစဉ်များ၏အရေအတွက်5တထောင် xnumx'y ရောက်ရှိခဲ့သည်။ တစ်နှစ်အစောပိုင်းကလေ့လာရေးခရီးသွားထံမှ 266 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ရှိကြောင်းမီးရထား, အခါးပတ်-လမ်းစီးပွားဖြစ်စီမံကိန်း၏အရေးပါသောမှတ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရထား, [ပို ... ]
ယူနိုက်တက်ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများသမဂ္ဂနှင့်စက်တင်ဘာလ 400 15 Haydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အတွက်ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်များကစတင်စျေးကွက်လုပ်ဆောင်ချက်xnumx.'cüနင်္ဂနွေနေ့ကျင်းပပေးခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများသမဂ္ဂ (BTS), စနစ်တကျxnumx.'cü၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းထုတ်ပြန်ချက်သည် AKP ကပြောပါတယ် [ပို ... ]
Sanliurfa အသွားအလာလမ်းဆုံ၏သဘောသဘာဝ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာအဓိကရုဏ်းKöprülügအသွားအလာမှဖွင့်လှစ်။ Şanlıurfaမြို့တော်ဝန် Zeynel တူနီးရှားတွင်Beyazgülအစပျိုးတံတားသတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲများ၏လမ်းဆုံများတွင် traffic ကိုမှဖွင့်လှစ်အဓိကရုဏ်းနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်ရရှိခဲ့ကြသည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး9။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့် Sanliurfa [ပို ... ]
အဆိုပါရှေ့တော်၌ထိုအကဲဖြတ်ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem Yüceပါရှိသောပြီးနောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတောင်တန်းအတိုင်းစက်ဘီးစီးချန်ပီယံ Sakarya MTB ဖလားပြိုင်ပွဲအားဖြင့်တည်ခင်းဧည်အဆိုပါမြို့တော်မြူနီစီပယ်၏သမ္မတအိမ်တော်ပြည်ခိုင်ဖြိုး, "2020 ကမ္ဘာ့ဖလားတောင်ဆိုင်ကယ်မာရသွန်ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ '' တစ်ဦးကကမ္ဘာ့ဖလားများအတွက်သန့်ရှင်းနင်း Translate '' [ပို ... ]
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မြို့လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းBaşiskeleခရိုင်Doğantepeရပ်ကွက်အတွင်း Istiklal လမ်းပေါ်တွင် superstructure အလုပ်လုပ်နေဖြင့်သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။ သိပ္ပံနည်းကျရေးရာဦးစီးဌာန 400 တထောင်၏မီတာအားဖြင့်ကောက်ယူလေ့လာမှုနယ်ပယ်အတွင်း [ပို ... ]
ဘဝကိုဖို့အများကြီးကုမ္ပဏီကြီးစီမံကိန်း Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး pass မြို့စင်တာများအဖြစ်လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ကျေးရွာများ, ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်ထုတ်သယ်ဆောင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခြေခံအဆောက်အအုံအကျင့်ကိုကျင့်မှာ IR နှင့်ဆိုးရွား Izmit ခရိုင်ရမ်းကဆောင်ရွက်လမ်း [ပို ... ]
အလုပ်လုပ်နာရီ Bursa အတွက်ကေဘယ်လ်ကားပြောင်းခဲ့သည်။ တူရကီရဲ့ Uludag သတိပေးအရေးကြီးဆုံးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားစင်တာများနှင့်သဘာဝတရား၏တဦးတည်း လာ. , ပါလိမ့်မည်သူကိုကေဘယ်လ်ကြိုးကား။ 140 500 Cabin နှင့်အတူနာရီစွမ်းရည်နှုန်းတထောင်ခရီးသည်,9ကီလိုမီတာနှင့်အတူကမ္ဘာ၏အများဆုံး [ပို ... ]
Project မှ Gaziantep အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများကိုဆက်လက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် Gaziray လေ့လာမှုများအကောင်အထည်ဖော်။ စျေးနှုန်းတင်ဒါအတွက် Gaziray5နှစ်ပေါင်းအကုန်ပြီးစီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေယူခံရဖို့ကီလိုမီတာနှုန်းဟာ 800 2020 သန်း၏ Medicalpark ဆေးရုံမြေအောက်လိုင်း။ Gaziantep [ပို ... ]
Ruhsar Pekcan ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျာမန်အော်တိုကုမ္ပဏီကြီး Volkswagen က Manisa အတွက်သစ်တစ်ခုစက်ရုံတည်ထောင်ရန်, စက်ရုံပင်ဒေသတွင်း၌တညျဆောကျခံရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဤ remark အပင်တစ်ပင်အဘို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်ပြည်နယ်အဆင့်မှာကောက်ယူလေ့လာမှုများထင်ရှားခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်တွင်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
25 မိမိတို့၏အသက်ဆုံးရှုံးကြောင်း Corlu နိုင်ငံသားများ, 340 အသစ်တစ်ခုအစီရင်ခံစာရထားမတော်တဆမှုအတွက်အစား TCDD ၏သောကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာအကြံပြုအဖြစ်ကိုပြင်ဆင်ခံရဖို့ခရီးသည်ဒဏ်ရာရ။ CHP Tekirdag လက်ထောက် Ilhami Ozcan Aygun အသစ်တစ်ခုတူရကီပြည်နယ်မီးရထားနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ကျွမ်းကျင်သူအုပ်စုတစ်စုနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံမျှ [ပို ... ]
စိတ်မရှည်အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ် Channel ကို Project မှစောင့်ဆိုင်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဘာလဲ? ကျနော်တို့ကတစ်နှစ် 2019 ကာလ၏အဆုံးချဉ်းကပ်အမျှ, မြေယာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ပိုင်ရှင်တွေတူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ် Do ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြသနည်း အခါ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စတင်လိမ့်မည်နည်း သူကမေးခွန်းအဖြေကိုရှာတော့တယ်။ ဒီမှာ [ပို ... ]
နှစ်ပေါင်း Trabzon အများအပြားကဏ္ဍများအားဖြင့်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခံရဖို့တောငျ့ပေမယ့်နေဆဲအလင်းရထားစနစ်စီမံကိန်း Trabzon အစီအစဉ်အပေါ်အပူချိန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ အနီးကပ် AK ပါတီစီးတီးမြို့တော်မြူနီစီပယ်လိုက်စီမံကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း [ပို ... ]
CHP Yarkadaş Haydarpasa ရထားဘူတာနာမကိုအောက်တွင်သားကောင်နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေး "ဒီ application ကိုရပ်တန့်က" ဖျောပြည် "လူငယ်အနုပညာဇုန်" ချိတ်ဆက်ခေါ်ဆိုမှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပိုင်Yarkadaş "Haydarpasa ရထားဘူတာကိုပိုမိုနှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးလက်၏ဧရိယာတက်ဖွင့်လှစ်။ တစ်ဦးကာကွယ်ထားဧရိယာဘယ်ဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
ဒါဟာအဓိကအားဖြင့် Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Yedikuyu ရပ်ကွက်အတွင်း Bertiz နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေဖို့ access ကိုပေးကတ္တရာသွေးလွှတ်ကြောအတွင်းက၎င်း၏အလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, လမ်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်အလုပ်ဆက်စပ် Yedikuyu ကတ္တရာအလုပ်ဖို့နည်းလမ်းအပေါ်စတင်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံအကငျြ့ရေးဦးစီးဌာနပေါ် မူတည်. [ပို ... ]
ပင်လယ်လမ်းဖြင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်RayHaber 25.01.2019 တင်ဒါသတင်းလွှာ 25 / 01 / 2019 ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တွင် 25.01.2019 အတွက်တင်ဒါမှတ်တမ်းမရှိပါ။RayHaber 04.02.2019 တင်ဒါစာစောင် 04 / 02 / 2019 ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တွင် 04.02.2019 ရက်စွဲ [ပို ... ]
သူတို့ရဲ့ယာဉ်များ၏သက်သာခြင်းအတွက်တိုးတက်မှုအပေါ် traffic အဖြစ်လမ်းသွားလမ်းလာ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မြို့မှအသစ်နှင့်ခေတ်သစ်မြေပေါ်လူကူးရောက်စေဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ , Izmit ခရိုင်မွေးကင်းစရပ်ကွက်အတွင်းÇetinEmeçမြေပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်ဟောင်းဖြစ်ခြင်းနှင့် [ပို ... ]
Gaziantep အတွက်မြို့လယ်မှမြို့ဆင်ခြေဖုံးချိတ်ဆက်တံ့သောရထားလမ်းစီမံကိန်း၏ Gaziray အမည်ဖြစ်တယ်။ ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးပထမဦးဆုံးလများ 2017 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုအများအပြားအဆင့်ဆင့်ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Cigdem Toker သတင်းအဆိုအရ; "ဒီပရောဂျက်မကြာသေးမီရက်အတွင်း 4,8 ကီလိုမီတာအရှည်ခုနှစ်တွင်", "ဖြတ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုဖုံးလွှမ်းနူးညံ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Karabükသံနှင့်သံမဏိအလုပ်လုပ် (KARDEMİR) က "ribbed ကွိုင်" ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ start ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကြေညာချက်ဒါရိုက်တာKARDEMİRဘုတ်အဖွဲ့က၎င်း၏စျေးကွက်ရှယ်ယာသတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည်တိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတမဟာဗျူဟာအဘို့ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုနှင့်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူတန်ဖိုးကို-added ထုတ်ကုန်အတွက်စက်ရုံမှာလုပ်လေ၏။ ကုမ္ပဏီ၏အရည်အသွေး [ပို ... ]
ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်ကျင်းပတစ်ချိန်တည်းမှာ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, အများအပြားမြို့ပြ။ အဆိုပါဆောင်ပုဒ်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးဖြစ်ရပ်များကျင်းပလိမ့်မည်အားပေးအားမြှောက်, တစ်ပတ်တစ်လျှောက်လုံးအချို့သောလမ်းများနှင့်နည်းလမ်းအပေါ်အသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်သည့် "ကျနော်တို့လမ်းလျှောက်အတူတကွ" ဖြစ်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်း 22 အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer, Izmir အတွက်မသန်စွမ်းအခွင့်အရေးများ၏လယ်ပြင်တွင်လှုပ်ရှားမှုများထွက်သယ်ဆောင်သောဥရောပ Mobility ကိုအပတ်အတွက်ရေရှည်တည်တံ့မည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမူဝါဒကကူညီပံ့ပိုးရန်သူ Espedalen အစည်းအရုံးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Espedalen အစည်းအရုံး "ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်" အတိုင်းအတာများနှင့်မသန်စွမ်းခြင်းမရှိဘဲ [ပို ... ]
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (383) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)